Khadadka Basaska cusub ee Denizli 23 ayaa Duulimaadyo Bilaabanaya bisha Agoosto | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean20 DenizliKhadadka Basaska Cusub ee Denizli 23 Waxay Bilaabmaysaa Duulimaadyada Bisha Agoosto
20 / 08 / 2019 20 Denizli, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Khadadka cusub ee basaska ayaa ka bilaabma marina bisha Agoosto
Khadadka cusub ee basaska ee ay hirgalinayso Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli ee 6 gobal gaar ah 23 Agoosto 2019 ayaa la furi doonaa Jimcaha. Marxaladda koowaad, wadada ugu weyn ee 19 waa la shaqeyn doonaa, nidaamka nambarka lambarrada 2 ee basaska waa la joojinayaa nidaamka gaadiidka dadweynaha ee magaalada.
Isbedelka ayaa waxaa bilaabay Dowlada Hoose ee Magaalada Denizli, oo si weyn loogu qadariyo maalgashikeeda ku aadan dhanka gadiidka ee Denizli, iyadoo la bilaabay in la hirgaliyo ilaa 23 Agoosto 2019 Jimcaha. Marka la eego baaxadda arjiga, Xarunta Magaalada Denizli waxaa loo qeybiyay gobolka 6 waxaana waddo loo abuuray agagaarka 36, iyadoo 60 ay tahay khadka ugu weyn. Xaaladda guud, waxaa lagu dhawaaqay in safka ugu horreeya ee 19 la shaqeysiin doono laga bilaabo Jimcaha illaa Agoosto 23, iyo khadadka harayna lagu fulin doono qaybo. Nidaamka cusub, nidaamka lambarrada lambarrada '2019' ee lambarrada ah ee laga hirgaliyo basaska degmada ayaa la joojiyaa waxaana la soo saaray nidaamka nambarada 2. Taas ka dib, dhammaan nambarada baska ee degmadu waxay noqon doonaan lambarro ah '3', lambarkii u horreeyay ayaa meteli doona aagga baska.
U fiirsashada ogeysiisyada
Waxaa lagu dhawaaqay in khadadka iyo lambarrada basaska ay ku dhaqmi doonaan Denizli Metropolitan Municipal, oo ujeeddadeedu tahay ka dhigista isticmaalka baska mid soo jiidasho u leh muwaadiniinta, ayaa lagu dhawaaqi doonaa 20 Agoosto 2019 Talaadada. Ogeysiisyo, joogsiyada basaska, isdhaafsiga basaska, meelaha mashquulka badan ee magaalada, warbaahinta bulshada iyo dhammaan aaladda isgaarsiinta ayaa la sameyn doonaa. Intaa waxaa dheer, xariijin cusub iyo lambarro bas ayaa laga heli karaa Xariirka Gaadiidka Magaalada Caasimadda ee Denizlihttps://ulasim.denizli.bel.tr/) waa la sharixi doonaa. Muwaadiniinta waxaa laga codsaday inay raacaan ogeysiisyada ay quseyso si looga fogaado wixii cabasho ah.
Si dhakhso ah, dhaqaale ahaan iyo safar raaxo leh
Duqa Magaalada Denizli ee Magaalo Weynta Cusmaan Cusmaan Zolan ayaa sheegay inay hadafkoodu yahay ka dhigista isticmaalka baska mid soo jiidasho leh khadadka iyo qawaaniinta cusub, iyo in gaadiidka dadweynaha leeyahay faa'iidooyin badan oo dhaqaale, gaar ahaan cufnaanta taraafikada iyo ka hortagga wasakhowga hawada. Duqa Cusmaan Zolan wuxuu cadeeyay inay dib u eegi doonaan wadooyinka basaska ee dawlada hoose iyadoo ay ugu wacan tahay tirada dadka kunool iyo degsiimooyinka oo sii kordhaya. Khadadkeena cusub ee loo yaqaan '23' ayaa laga shaqeyn doonaa laga bilaabo Agoosto 2019 Jimcaha. Muhiimadeena ayaa ah in muwaadiniinteenu ay u safraan si dhaqso leh, dhaqaalo badan iyo raaxo leh. ”
Shirkadaha Basaska Ayaa Bilaabaya Duulimaadyada 4-ta Bisha lixaad
Rugta Guriga ee Silkworm 1 ayaa bilaabay safarro bil gudaheed (Sawir Sawir ah)
Silkworm Tramway Tramway wuxuu bilaabmaa safarro berrito
Burdurda Pamukkale Express waxay bilowday Safarrada
Tareenada laba-geesoodka ah ee Ruushka ayaa bilaabmaya dhammaadka July
Tareenka jasiiradaha oo ka bilaabanaya Mithatpaşa
Hello Kitty Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bilowga ee Japan
Waqtiga la filaayay wuxuu yimid 22 kiiloomitir Kadıköy-Kartal mitir 17-kii Agoosto…
Khadadka Basaska Cusub ee Denizli
Raadinta Gawaarida Gawaarida Telefoonada ee Denizli
Hadalka 23 ee baabuurta telefishanka bilaashka ah ee carruurta ee kuyaala badda